Download Music si YouTube ma ọ bụ nrụọrụ ka iPhone / iPad / iPod
Download music si YouTube / weebụsaịtị ka iPhone / iPad / iPod
Mbụ nke ihe niile ị chọrọ ibudata music si YouTube gị iTunes Ọbá akwụkwọ na n'ihi na nke a, i nwere ike na-ezo aka na ndu - YouTube / weebụsaịtị ka iTunes
Ugbu a jikọọ gị iOS (iPhone / iPad / iPod) ngwaọrụ gị PC. Were a USB na jikọọ na ya otu njedebe nke iOS ngwaọrụ na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke PC. Ozugbo ngwaọrụ jikọọ, ọ ga-egosi n'okpuru ngwaọrụ nhọrọ nke TunesGo n'ụlọ peeji on n'akụkụ aka ekpe menu. (Nseta ihuenyo egosi ejikọrọ iPhone / iPad / iPod karị).
Nzọụkwụ 3. Nyefee ebudatara music ka iOS ngwaọrụ
Ugbu a ị chọrọ nyefee ebudatara music gị iOS ngwaọrụ. Gaa n'aka ekpe nke TunesGo peeji na n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ click on Na nhọrọ na-ga-emeghe ndepụta nke ebudatara songs. Ma site nyere ndepụta, họrọ songs na ị chọrọ nyefee na mgbe ahụ nri click site na nke họrọ "Tinye ka" ọrụ. A ndepụta nke ngwaọrụ ga-apụta site na nke mkpa ka ị họrọ lekwasịrị ngwaọrụ ebe ebudatara songs ga-agafere. (Nseta ihuenyo egosi red akara igbe na Yuki si iPhone dị ka iche ngwaọrụ)
Ị nwere ike ịlele songs nke na-agafere site na ịga na nwaa ngwaọrụ on n'aka ekpe nke menu ma hụ ndepụta n'okpuru "Music" nhọrọ. (Nseta ihuenyo egosi 2 songs dị ka kpọfere Yuki si iPhone).
Ọzọ: Download Music Site YouTube / weebụsaịtị ka akporo ekwentị